”WEJI KAAMA LIHI” – Maraykanka oo ”leexsaday” dayuurad maasgaraha Covid-19 u qaadi lahayd Faransiiska | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”WEJI KAAMA LIHI” – Maraykanka oo ”leexsaday” dayuurad maasgaraha Covid-19 u qaadi...
”WEJI KAAMA LIHI” – Maraykanka oo ”leexsaday” dayuurad maasgaraha Covid-19 u qaadi lahayd Faransiiska
(Paris) 03 Abriil 2020 – Maraykanka ayaa fellisaad ku dhacay 60 milyan oo ah maasgarayaal dawaysan oo Chinese-samee ah oo ku socdey dalka Faransiiska.
Sida laga helay dhanka Faransiiska Maraykanka ayaa dayuuraddii qalabkan siddey qabsaday daqiiqado yar kahor markii ay kaci lahayd, sida uu sheegay Madaxa Gobolka Koonfur Galbeed ee Provence-Alpes-Côte d’Azur.
“Dalab Faransiiska u socdey ayaa waxaa kaash 3-4 jeer ka badan kii ay Faransiisku bixiyeen ku fellisey Maraykanka, waxayna dayuuraddu u jihaysatey Maraykanka,” ayuu yiri Muselier oo la hadlayey RT France.
France ayaa dalbaday in ka badan hal bilyan oo ah maasgaraha dawaysan ee sanka iyo afka lagu dhowro, kuwaasoo badankoodu ka imanaya Shiinaha, jeer ay dowladdu la tacaalayso caabuqa corona oo dalkaa kusii xoogaysanaya, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadku.
Wasiirka Caafimaadka, Olivier Veran, ayaa sheegay inay Faransiisku todobaadkii oo qura isticmaalaan 40 milyan oo maasgare, iyagoo iminka haya wax ay sii isticmaalaan 3 todobaad oo qura.
France ayaa diiwaan geliyey 57,000 kiis oo COVID-19 ah, waxaana ka dhintay 4,000, halka ay ka raysteen 11,000.
Previous articleMaxay NISA aragtay oo aynaan ogayn, sida ay arrinta u wajahdey se maku saxan tahay?
Next articleMuran ka dhashay laba dhakhtar oo Faransiis ah oo soo jeediyey in tallaalka Covid-19 Afrika lagu tijaabiyo!!